China High Quality G550 275 Zinc Hot tinye Galvanized Steel eriri igwe Manufacturers na suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Galvanized Steel eriri igwe > Hot tinye kpaliri Steel eriri igwe > G550 275 Zinc Hot tinye Galvanized Steel eriri igwe
Isi njirimara nke eriri igwe nchara galvanized nwere nguzogide corrosion siri ike, ịdị mma dị elu, nke bara uru maka nhazi ọzọ, nke akụ na ụba na nke bara uru. G550 275 Zinc Hot Dipped Galvanized Steel Coil na -ekpuchi Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa na ahịa South America.
Zero Spangle, Obere Spangle, Spangle oge niile, Nnukwu Spangle
Chromated, mmanu, enweghị mmanụ
A na -ejikarị G550 275 Zinc Hot Dipped Galvanized Steel Coil na -ewu ihe, ngwa ụlọ, ụgbọ ala, arịa, ụgbọ njem na ubi ndị ọzọ, ọkachasị na nhazi ihe nchara, imepụta ụgbọ ala, imepụta ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Mwube ụlọ, igwe nchara ọla, ọwa mmiri, oghere nchebe nke okporo ụzọ, ọwa U/C na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwere asambodo nke ISO9001, SGS na BV iru eru maka G550 275 Zinc Hot tinye Galvanized Steel Coil.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: G550 275 Zinc Hot Dipped Galvanized Steel Coil, Ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ya, N'ogbe, Zụrụ, Ụlọ ọrụ, ahaziri ya, na ngwaahịa, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ọkọnọ, dị ọnụ ala, mbelata, ọnụ ahịa dị ala, zụta ego, ọnụ ahịa, ọnụahịa Ndepụta, Nkwupụta, SGS, BV, Kacha ọhụrụ, Ogo, na -adịgide adịgide, akwụkwọ ikike afọ iri